धितोपत्रको लफडा, अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नै सहसचिवमाथि अविश्वास ! — Imandarmedia.com
काठमाडौँ। कोको तानिए अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरणमा ? अर्थ मन्त्रालयले बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका नाममा बेनामे स्पष्टीकरण सोध्यो । स्पष्टीरकणमा कुनै व्यक्ति वा पदलाई इंगित नगरी बोर्डकै नाम लेखिएका कारण यो पत्र कसमाथि लक्षित हो भन्ने स्पष्ट छैन। अर्थ मन्त्रालयको पत्रले सम्पूर्ण बोर्डका सञ्चालक सदस्यदेखि पुरै कम्पनीमाथि नै मन्त्रालयको अविश्वास झल्कन्छ । पत्रमा अमूक मिडियामा समाचार आएको विषय उल्लेख गरिए पनि कुनचाहिँ विषयमा कसलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो, खुलाइएको छैन।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना छन् । धितोपत्र बोर्डको ६ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा स्वयं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि सञ्चालक छन्। यसर्थ, मन्त्रालयको स्ष्टीकरण स्वयं आफ्नै सहसचिवमाथि पनि सोधिएको स्पष्ट छ।अहिले अर्थमन्त्रालयबाट सहसचिवका रुपमा रामेश्वर दंगालले धितोपत्र बोर्डको सदस्यका रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। बोर्डका नाममा लेखिएको पत्रले दंगाललाई पनि जवाफदेही बनाएको छ।
बोर्डको सञ्चालक सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई पनि सदस्य छिन्। उनले पनि बोर्डको सदस्यका हैसियतले स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणकर भट्ट, चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाका उपाध्यक्ष युद्धराज ओली पनि धितोपत्र बोर्डका सदस्य रहेकाले उनीहरुले पनि जवाफ दिनुपर्ने भएको छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि धितोपत्र बोर्डका सदस्य हुन्। त्यस्तै विज्ञका रुपमा अशोक कुमार पौडेलमाथि पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पारिवारिक सदस्यका नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर निष्काशन हुनुअगावै हात पारेको खुलासा एक सञ्चार माध्यमले गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड र नेप्से दुबैलाई संस्थागतरुपमा स्पष्टीकरण सोधेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका अधिकृत श्यामप्रसाद आचार्यको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टकरण पत्र बोर्डलाई १३ गते र नेप्सेलाई १४ गते पठाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यो पत्र सञ्चार माध्यमलाई पनि उपलब्ध गराएको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र बजारको नियामक निकाय हो। नियमन गर्नुपर्ने निकायले नै सेयर बजारमा चलखेल गर्न खोजेको आरोप छ। बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले धितोपत्र निष्कासनको तयारी गरिरहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ हजार ९ सय ९२ कित्ता शेयर छोरीको नाममा राखेको प्रमाणसहित एक सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीइओ पनि मुछिएका छन्। सीइओ चन्द्रसिंह साउदले परिवारकै सदस्यको नाममा सेयर किनेको भनिएको छ
सर्वोत्तम सिमेन्टले ६० लाख कित्ता शेयर बुक बिल्डिङ मार्फत निष्कासन गर्न लामो समयदेखि प्रक्रियामा छ। तर, सेयर निष्काशन नहुँदै नियामकहरुले आफ्नो स्वार्थअनुरुप सेयर खरिद गरेका छन्। शेयर निष्कासनका लागि गत ४ चैतमा कम्पनीले ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकका रूपमा नियुक्त गर्न सम्झौता गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अहिले विषयको गम्भीरता र सत्यता परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माको एक्सन, भन्सार विभागका कर्मचारीहरुको झारे झांको